China 350L / 450L Tilt truck –B-110A / B-110B orinasa sy mpanamboatra | Jinqiu
Matetika ny faritra rehetra dia manangona kitapo kely na lehibe, mila hafindra any amin'ny tobin'ny fako izy ireo, saingy be loatra sy mavesatra loatra izany, avy eo mila kamio mitongilana isika. Ny famolavolana ny kamio mitongilana eran'izao tontolo izao dia ny famahana ny olan'ny fako mavesatra sy mavesatra mba hamindrana ireo fako mavesatra sy mavesatra mankany amin'ny toerana fanariana farany azy ireo.
450L sy 350L fahafaha-lehibe.
Kodiarana roa lehibe sy matanjaka mihetsika mora sy milamina.
Volavola ergonomika izay mampitombo ny fahombiazan'ny asa ary mampihena ny tsiranoka.
Ny famolavolana sloping dia manamora ny fivoahan'ny fako.
Mora kokoa ny manadio ireo fitaovana plastika avo lenta.
Ny kamio mitongilana dia vita amin'ny akora plastika maharitra, izay manamaivana ny kamio sy mora kokoa noho ny vy.
Ny mampiavaka ny kamio mitongilana dia ny firafiny mavesatra sy ny fahafahany mitana enta-mavesatra. Fitaovana roa samy hafa misy 350L sy 450L no natao eto, izay mahatonga azy ireo ho tonga lafatra tsara hampiasaina amin'ny toerana anaovana fahaiza-manao lehibe.
Ny mampiavaka ny sarety mitongilana dia ny endrika ergonomika, izay manatsara ny fahombiazan'ny asa ary mampihena ny adin-tsaina rehefa mihetsika zavatra mavesatra. Azonao atao ny mampiasa ireo vokatra ireo hitaterana entana manerana ny orinasa na hanangonana fako ary hitondrana azy any amin'ny fako.
Ho fanampin'izany, ireo kamio mitongilana ireo dia misy mpandefa andraikitra mavesatra, izay manamora ny fanodikodinana ny kamio ao amin'ny trano fitahirizanao na ny tontolon'ny orinasa.
Ny tena zava-dehibe dia mora diovina ny kamio mitongilana, ary azonao atao ny manasa azy amin'ny hosotra aorian'ny fampiasana azy.
Ny orinasanay dia afaka manome andiam-pako, kamio fako, fitoeram-pako amin'ny loko, fahaiza-manao ary fomba fanao isan-karazany. Miaraka amin'ny akora tsara indrindra sy ny lanjany ampy mba hiantohana ny kalitao azo antoka, raisinay an-tanan-kaleha ny fanontanianao, hahazo vidiny mirary avy aminay ianao.
Previous: 58L Fanangonana taratasy fako 58-B-016A / B-016B / B-016C
Manaraka: 660L Carto ivelany fako-B109
Fako lehibe fako
Tranon-fako mihodina eny ivelany
Fako fako plastika
13L / 23L / 42L vovoka plastika toradroa-B035 / B034 / B033
Carteur Janitor- D-011